Dowladda oo xir-xirtay dhallinyaro bannaanbax dhigtay | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda oo xir-xirtay dhallinyaro bannaanbax dhigtay
Maamulka gobolka Benaadir ayaa xir-xiray dhallinyaro ku shaqeysata Mooto Bajaajta kuwaasoo bannaanbax ka dhigayay magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maamulka Gobalka Benaadir ayaa xabsiga dhigay Cabdi Fitaax Ismaaciil oo kamid ahaa dhalinyaro Bajaaj ley ah oo maanta banaanbax Cabasho ka dhan ah gobalka ka dhigay taalada dajirka Dahsoon ee Muqdiaho. Cabdifitaax ayaa ahaa shaqsi si adag dhalinyarada ugu hadlay muujiyayna dhibaatooyinka ay qabaan taas oo baraha bulshada aad looga hadal haayo.
Maamulka gobalka banaadir ayaa la sheegay in ay dhibsadeen hadalka garnaqsiga ah ee uu jeediyay wiilkaan sidaasna loogu xeray saldhiga degmada Xamarwayne sida ay ii xaqiijiyeen qaar kamid ah eheladiisa.
Dhallinyaro farabadan oo kamida kuwa mooto Bajaajta ku shaqeysta ayaa maalin walba dhibaato kala kulma dowladda, iyagoo canshuur bixiye-yaal ah ayey haddana dhibanayaal u yihiin maamulka ka jira gobolka Benaadir. Cabdifitaax waxa uu kamid yahay dhallinyarada ka qalin jabisay mid kamida Jaamacadaha dalka, markii uu waayay wax shaqo ah ayuu go'aansaday in uu mooto Bajaajta isaga shaqeysto, iyadii ayuuna ku dhiban yahay maanta oo dhibaato ay ku hayaan ciidamada dowladda ee dariiqyada taagan ayaa haddana xarig loogu daray.
Canshuur bixiyayaasha ugu badan iyagoo ah ayaa haddana waddooyinka qaar loo diidaa dhallinyarada ku xamaalata mootada, waxaa intaa usii dhiir canshuurta laga qaado looguma dhiso waddooyinka burbursan ee xilli roobaadkana biyaha ay gooyaan.